Ciidamada amniga ee magaalada Garoowe oo 4-qof usoo qabqabtay isticmaalka maandooriyaha khamriga. – Radio Daljir
Ciidamada amniga ee magaalada Garoowe oo 4-qof usoo qabqabtay isticmaalka maandooriyaha khamriga.
Garowe, Mar 31 -Ciidamada amaanka ee magaalada Garoowe ayaa howlgal ay habeenkii xalay ka sameeyeen magaalada Garoowe waxaa ay kusoo qabqateen dad faraha kula jiray isticmaalka maandooriyaha khamriga.
Taliyaha saldhiga dhexe ee magaalada Garoowe Aadan Muuse Jaamac oo waraysi gaar ah siiyaya Radio Daljir ayaa sheegay ciidamada amaanka oo kaashanaya warbixino ay heleen inay soo qabqabteen 4-qof oo adeegsanaysa maandooriyaha Khamriga.
Waxaa uu sheegay khamriga inuu ku jiray caagada biyaha lagu cabo ee loo yaqaano Shalmaan, isagoona intaasi ku daray ciidamadu inay howlgaladan oo kale inay ka sameeyeen magaalada Garoowe iyo goobaha kale ee ka baxsan.
Taliyaha ayaa ugu dambeyntii digniin u jeediyay dadka ku howlan ka ganacsiga iyo cabista maandooriyaha khamriga, isagoona sheegay dadka xiligaan la hayo iyo qamrigooda inay u gudbin doonaan maxkmad.
Golaha wakiilada ee dowladda Puntland ayaa horay u ansixiyay xeer lagu mamnuucayo ka ganacsiga iyo iibinta maandooriyeyaal uu qamrigu ka midyahay.